Fact talk/खांटृी कुरा: साभार आलेख
मुटुरोगि भुराभुरीहरुलाई खुसीको खबर
By: janak dangol on December 28, 2016 / comment :0साभार आलेख
मुटुरोगीलाई गंगालाल हस्पिटलमा के छ निःशुल्क सेवा ?
काठमाडौं– उमेरले १५ वर्ष नकटेका मुटुरोगीले आर्थिक अभावमा उपचार नपाएका समाचार देशभरबाट आइरहेका हुन्छन् । तर, सरकारले १५ वर्ष मुनिका मुटुरोगीहरुको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो सेवा राजधानीका शहीद गंगालाल हृदय रोग केन्द्र, मनमोहन कार्डियो भाष्कुलर थोरासिक सेन्टरलगायतमा उपलब्ध छ ।
यीमध्ये मुटुरोगको उपचारका लागि सबैले थाहा पाएको ठाउँ हो, गंगालाल राष्ट्रि हृदय रोग केन्द्र । जहाँ १५ वर्षका मुनिकलाई मात्रै अन्य मुटुरोगीलाई पनि विभिन्न सेवा र सहुलियत दिइन्छ । यसबारे जानकारी नहुँदा रोग लुकाएर बस्न बाध्य हुनेका लागि यो महत्वपूर्ण हुन सक्छ ।
निःशुल्क र राहत सुविधा
मुटुरोगको निःशुल्क उपचार १५ वर्षमुनिका र ७५ वर्ष माथिका नेपाली नागरिकहरुले पाउँछन् । यसैगरी मुटुको साँघुरिएको भल्भ फुकाउने प्रविधिको सेवा पनि सबैलाई निःशुल्क उपलब्ध छ । गरिब विपन्न वर्गका मुटुरोगीले सरकारबाट पाउने १ लाख रुपैयाँ राहत सुविधा छ । यसैगरी निःशुल्क भल्भ वितरण सुविधा पनि गंगालालले उपलब्ध गराउँछ ।
के चाहिन्छ सेवा लिन ?
यदि १५ वर्ष कम उमेरको वा ७५ वर्ष भन्दा बढी उमेरको बिरामीले पाउने सुविधा लिने हो भने उमेर खुल्ने कागजपत्र चाहिन्छ । यसैगरी विपन्न वर्गका बिरामीले पाउने अन्य सुविधाका लागि लालपूर्जा लगायत सम्पत्ति विवरण खुल्ने कागजातको फोटोकपी, गाविस वा नगरपालिकाको सिफारिस, पारिवारिक बेहोरा खुल्ने निवेदन र केन्द्रबाट वितरण हुने फारम भर्नुपर्छ ।
निःशुल्क उपचार सेवामा के पाइन्छ, के पाइँदैन ?
निःशुल्क उपचार भनेपछि त्यसक्रममा लाग्ने सबै सित्तैमा भन्ने बुझिन्छ । तर, यसमा केही सिमितता छन् । माथिका प्रक्रिया समेत पूरा गरेको मुटुरोगी प्रमाणित भएमा अस्पतालले मुख्य सेवाहरु निःशुल्क नै उपलब्ध गराउँछ । जस्तोः सर्जरी, क्याथ प्रोडुसर, पेसमेकर, सीएजी, इपीएस–आरएफए, डायग्नोष्टिक प्रोसुड्युअर र यसका लागि चाहिने सामग्रीहरु, भर्ना भइसकेपछि चाहिने सुईमार्फत दिइने औषधीहरु निःशुल्क पाइन्छ । तर, मुखबाट खानुपर्ने औषधी, अस्पताल फार्मेसी उपलब्ध नभएका सामग्रीहरुलगायत चाहिँ आफैंले किन्नुपर्छ ।
यो जानकारी आफूले प्राप्त गरेपछि अरुलाई पनि बाँड्न नछुटाऔं । किनभने यति जानकारी नपाएर रोग लुकाएर बस्ने तपाईं हाम्रै नजिकको पो कोही छन् कि ?
(स्वास्थ्य खबर पत्रिकाबाट साभार)
गहिरो अर्थलाग्ने तस्बिरको कथा
By: janak dangol on December 22, 2016 / comment :0साभार आलेख
यो लेखमा एउटा यस्तो तस्विर सहितको कथा राखिएको छ जसलाई बुझ्न संसारलाई धेरै समय लाग्यो । विश्लेषकहरु पनि यतिसम्म दोधारमा परे कि जबसम्म चित्रकार स्वयमले यो तस्विर पछाडिको रहस्य खोलेनन् तबसम्म तस्बिरले भन्न खोजेको अर्थ के हो भनेर बुझ्ने सकेनन ।
प्रस्तुत तस्बिरमा तँपाईं हामी सजिलै देख्न सक्छौ कि यो तस्विरको कलामा नग्नता छ , छाडापन छ । तस्विर हेर्ने जो कोहीलाई पनि लाग्न सक्छ एक अधबैंसे आईमाईको स्तनपान कसरी त्यति बृद्ध मानिसले गरे ? जब यो तस्विरको वास्तविकता बुझ्नु हुनेछ तब पक्कै पनि तँपाईंहरुको आँखाबाट दुई थोपा आँसु तँपाईहरुलाई थाहै नदिई बग्नसक्छ ।
तस्विर युरोपका एक प्रख्यात चित्रकार मुनरोले बनाएका थिए र तस्बिरको वास्तबिक कथा भने यस्तो थियो ।
एक देशमा एक जना बृद्ध मानिसलाई भौके जेलमा राखेर मार्ने फैसला उक्त देशको न्यायालयले सुनाएको थियो । जबसम्म भोकले बृद्ध मर्देनन् तबसम्म उनलाई जेलमा भौके राख्नुपर्ने भनेर आदेस दिइएको थियो । एक दिन तस्बिरमा देखाईएको बृद्धकी छोरीले न्यायालय समक्ष आफ्ना बृद्ध बाबुलाई नियमित भेट्ने अनुमति मागिन् । माग भए अनुसार न्यायालयले उनलाई हरेक दिन जेलमा आफ्नो बृद्ध बाबुलाई भेट्न आउने इजाजत दियो ।
जेलमा हरेक दिन आफ्नो बाबुलाई भेट्न जानु भन्दा पहिले उनको शरिर, झोला सबैको खानतलासी हुन्थ्यो कारण झोला या शरिरमा कुनै खानेकुरा लुकाएर उनकी छोरीले आफ्नो बृद्ध बाबुलाई लगेर नदिउन् भन्ने थियो । उनकी छोरीले उनलाई भेट्न जाँदा कैंयौं दिन देखि खाना नखाएका आफ्नो बाबुलाई देखेर छोरीको मन यसरी पग्लियो कि आफ्नो बाबुलाई ज्यूँदो राख्नका लागि उनले शाहसिक निर्णय गर्दै आफ्नो स्तनबाट दूध पिलाउन लागिन् ।
कैंयौं दिन, महिना बिते तर ति बृद्ध भोकले मरेनन् । यो देखेर जेलरलाई शंका लाग्न थाल्यो र आफ्ना सिपाहीहरुलाई चियो गर्न लगाए । यसरी चियो गर्दा ति छोरीले आफ्नो स्तनबाट दूध पिलाएर उक्त बृद्धलाई बचाउन सफल भएको रहस्य खुल्यो ।
रहस्य खुलेपछि छोरी माथि पनि मुद्दा चलाईयो । फैसला सुनाउनु भन्दा अगाडी संजाय दिने न्यायाधिसको ह्रदय परिवर्तन भयो र न्याधिसले कानून छाडेर भावनात्मक फैसला सुनाउँदै बाबु छोरी दुबैलाई रिहा गरिदियो ।
भनिन्छ माथीको तस्विरमा सोही कुरा देखाईएको छ र यो तस्विर त्यति बेला निकै महङ्गो दाममा बिक्री भएको थियो ।
(पत्रकार राज आरुष सापकोटाले साभार गरेर फेसबुकमा राख्नु भएको यो सचित्र कथा पत्रकार राज आरुष सापकोटाको फेसबुकबाट साभार गरिएको हो)
किन मान्दैनन नेवार जातिले तीज ?
By: janak dangol on September 05, 2016 / comment :0साभार आलेख
सुर्य दर्शन पछिको तस्बिर : तस्बिर साभार गुगल सर्च
बेल बिवाह: तस्बिर साभार गुगल सर्च
यस्तो अवस्थामा यो तीजको व्रत लिई नेवार महीलाहरुले पुन: सौभाग्यका लागि व्रत बसि कामना गर्नु पर्ने आवश्यक्ता धर्मशास्त्रले देखाएको छैन । यसै कारणले गर्दा सनातन हिन्दू नै भयेतापनी नेवार महीलाहरुले तीजको यो व्रत लिदैनन,
आजकाल केही नेवार महीलाहरुले अरुहरुको देखासिकी गर्दै रहरले यो व्रत बसेको देख्न पाउँछौ जुन नेवार परम्परा, संस्कृत र धर्म संस्कार बिपरित छ ।
यी सबै विवरणहरु विकिपिडिया तथा फेसबुकबाट साभार गरिएको हो !
राष्ट्रका अघोषित शत्रु
By: janak dangol on August 04, 2016 / comment :0साभार आलेख
भारतीय खर्च र निर्देशनमा त्यो प्रदर्शन भएको कुरा सहजै बुझन सकिन्छ। झन्डै चालीस बर्ष अघिदेखि दिल्लीको दिग्दर्शनमा हिडिरहेका भट्टराई आफ्ना स्वामीहरुप्रति आज पनि इमानदार छन् र उनलाई जुन शक्तिले नेपालमा काजमा खटाएको छ, त्यो राष्ट्रका उनी राष्ट्रवादी नै हुन्।
यस्तो अवस्थामा जात, दल, प्रान्त, गुट र संकीर्ण स्वार्थबाट माथि उठेर राष्ट्रको वृहत्तर हितका निम्ति समर्पित हुन सक्ने कुनै व्यक्ति र शक्ति अगाडि आउन सकेका छैनन् । राष्ट्रका प्रवल शत्रुहरु प्रकट छन् र राष्ट्रवादी शक्ति गुप्तवासमा। तसर्थ आशावादी बन्ने आधार देखिदैन।